Ray Dalio mitsara: Iwo makumi maviri neshanu akanakisa maRay Dalio mitsara uye maanodyara | Ehupfumi Zvemari
Mumwe wevatengesi vakanakisa pasirese ndiRay Dalio. Iye ari billionaire weAmerican philanthropist uye hedge fund maneja ane degree raTenzi muADE (Bhizinesi Rezvekutonga). Parizvino ine mambure akakosha anodarika $ 20 bhiriyoni. Nechikonzero ichi zvinogona kuve zvinonakidza kwazvo kuverenga zvirevo zvaRay Dalio.
Kana iwe uchida kudzidza uye kuzvikurudzira iwe kutanga kana kuenderera nebasa rako munyika yemari, ini ndinokurudzira kuti urambe uchiverenga. Kudzidza kubva kune vakanakisa varimi munyika vanogona kuenda kure nzira. Neichi chikonzero chakafanana, zvinokurudzirwa zvikuru kuti iwe uverenge uye upinze mukati memazwi akakura aRay Dalio.
1 Aya makumi maviri nematatu akanakisa mitsara yaRay Dalio
2 Unoisa sei mari?
Aya makumi maviri nematatu akanakisa mitsara yaRay Dalio
Vatengesi vakuru saRay Dalio vane nhoroondo refu munyika yezvemari. Naizvozvo, hazvitomborwadzi kuverenga ake akakosha mitsara, nekuti vane ruzivo rwakawanda uye njere. Tevere tichaona runyorwa rwemakumi manomwe neshanu mitsara yakanakisa yaRay Dalio:
"Kusadzorwa nemanzwiro kunobatsira kuona zvinhu padanho repamusoro."
Usave munhu anoda kukwana, nekuti vanhu vanoita zvakakwana vanowanzoshandisa nguva yakawandisa pane misiyano midiki kumahombekombe vachirasikirwa nezvimwe zvinhu zvikuru uye zvakakosha. Iva unoshanda kusakwana.
“Nguva yakafanana nerwizi runotitorera kusangana nezviri kuitika zvinotimanikidza kuita sarudzo. Hatigone kumisa kufamba kwedu murwizi urwu uye hatigone kunzvenga kusangana ikoko. Tinogona chete kuswedera padyo navo nenzira yakanakisa.
"Ini ndinotenda kuti kunzwisisa izvo zvakanaka kunouya nekutarisa mashandiro anoita nyika uye nekuona mashandiro aungaita uchienderana nazvo kuti ibatsire kushanduka."
"Rangarira kuti usanyanya kuzvivimba pakuongorora kwako, sezvo ungangodaro uri kukanganisa."
"Kana iwe uchikwanisa kuzvifunga wega uchivhurika-pfungwa nenzira yakajeka kuti uwane zvakakunakira iwe, uye kana uchigona kukumbira hushingi hwekuita kudaro, uchaita zvakanyanya muhupenyu hwako."
"Kana usiri kukundikana, hausi kudarika miganhu yako, uye kana usiri kudarika miganhu yako, hausi kuwedzera kugona kwako."
"Kuteerera kune vanhu vasina ruzivo kwakaipisisa kupfuura kusava nemhinduro zvachose."
“Ndakadzidza kuti kana ukashanda nesimba uye neunyanzvi, unogona kuwana chero chaunoda, asi kwete zvese zvaunoda. Kukura ndiko kugona kuramba dzimwe nzira dzakanaka dzekutsvaga dzakatonaka.
"Zvikanganiso ndiyo nzira yekufambira mberi."
«Sarudza tsika dzako zvakanaka. Tsika ingangove iri yakasimba kwazvo chishandiso mubhokisi rako rematurusi.
"Pese paunotarisana nechinhu chinorwadza, uri panguva inogona kukosha muhupenyu hwako: une mukana wekusarudza chokwadi chine hutano uye chinorwadza kana fungidziro isina hutano asi yakasununguka."
"Chinhu chakakosha ndechekuti iwe ugadzire yako misimboti uye nekunyora pasi, kunyanya kana uri kushanda nevamwe."
Usambofa wakataura chero chinhu nezvemunhu chausingataure kwavari chaipo, uye usaedze kupomera vanhu usina kuvatarisa kumeso. Vanhu vanotaura zvakaipa kuseri kwemusana wako vanoratidza kushomeka kwakadzama kwekuvimbika uye havana pundutso. Haiburitse shanduko ipi neipi inobatsira, uye inopidigura vese vanhu vauri kurwadzisa uye nharaunda yese. '
“Kana iwe uchikwanisa kutarisa pamatambudziko ako, iwo anogara achidzikira kana kutsakatika, nekuti iwe unenge nguva dzose unowana nzira iri nani yekutarisana navo pane kana usingaite nawo. Kana dambudziko rikanyanya kuoma, zvakanyanya kukosha kuti iwe uritarise uye woritarisana naro.
“Hupenyu hwakafanana nemutambo waunotsvaga kukunda zvipingamupinyi zvinomira munzira yekuzadzisa zvinangwa zvako. Kunatsiridza mumutambo uyu kuburikidza nekudzidzira. Mutambo uyu unosanganisira nhevedzano yesarudzo ine mhedzisiro. Iwe haugone kumisa matambudziko uye sarudzo kuti dziuye kwauri, saka zvakanakira kudzidza kudzana nazvo.
"Kubudirira kunouya nekuziva zvausingazive, kupfuura zvaunoziva iwe."
"Zano rakanakisa randingakupa nderekuti uzvibvunze zvaunoda, wobva wabvunza kuti" ichokwadi chii "- wozobvunza kuti" chii chinofanirwa kuitwa nezvazvo ". Ini ndinofunga kana iwe ukaita izvi iwe unofamba nekukurumidza zvakanyanya kune izvo zvaunoda kuwana kubva muhupenyu pane kana usinga! ».
“Pazvikanganiso zvese zvaunodzidza kubva kwauri, unozochengetedza zviuru zvezvikanganiso zvakafanana mune ramangwana, saka kana ukabata zvikanganiso semikana yekudzidza inoburitsa kukurumidza kukurumidza, unofanirwa kufara nazvo. Asi kana ukavabata sezvinhu zvakaipa, unozozviitira iwe nevamwe zvinosuwisa, uye hauzokure.
"Usazvinetse nekutaridzika kwakanaka, shuwa kuti usvike pazvinangwa zvako."
“Kubudirira kunowanikwa nevanhu vanonyatsonzwisisa chokwadi uye vanoziva mashandisiro avo kuti vawane zvavanoda. Izvo zvinodzokororwa ndezvechokwadiwo: vanofunga vasina kunyatsogadzika muchokwadi vanogadzira matambudziko, kwete kufambira mberi.
"Vanhu vane hanya nekutaridzika zvakanaka vanowanzovanza zvavasingazive uye vanovanza kusasimba kwavo, saka havafi vakadzidza kubata navo nemazvo uye hurema uhwu hunoramba huri zvipingaidzo mune ramangwana."
"Kuti uedze kana uine hanya zvakanyanya nezvekutaridzika zvakanaka, ona kuti unonzwa sei kana iwe uchinge waziva kuti wakanganisa kana kuti hauna chaunoziva."
"Vanhu vanovhiringidza zvavanonyatsoda nezvazviri zvechokwadi vanogadzira mifananidzo yakashata yezvazviri inovatadzisa kuita sarudzo dzakanakisa."
Dzidza zvausingazive. Gara wakasununguka nokunzwisisa zvaunokanganisa uye zvausingakwanise.
"Zvinowanzoitika kune vanhu kurega iyo ego ichipinda munzira yekudzidza."
"Dambudziko guru revanhu vanhu vane mafungiro asiri iwo."
Usarwadziwe nezvikanganiso zvako kana zvevamwe. Ndinoda! Rangarira iyo imwe: ivo vanotarisirwa; maviri: ndiwo ekutanga uye akakosha chikamu chedzidziso yekudzidza; uye zvitatu: kunzwa zvakashata kwavari kunokutadzisa kubva kuve nani.
"Kuti uwane mari mumisika, unofanirwa kufunga zvakasununguka uye kuzvininipisa."
"Paunonyanya kufunga kuti iwe unoziva, iwe unowedzera kuvharika-pfungwa iwe unenge uri."
"Kana iwe uchifunga kuti zvakanyanya kuoma, yeuka kuti mukufamba kwenguva, kuita izvo zvinhu zvinoita kuti ubudirire zviri nyore pane kusabudirira."
"Kupfuura chero chinhu chipi zvacho, chinosiyanisa vanhu vanorarama mukugona kwavo kubva kune avo vasiri kuda kuzvitarisa uye nevamwe zvine chinangwa."
“Kukanganisa kukuru kunoitwa nevashandisi kutenda kuti zvakaitika munguva pfupi yadarika iyi zvinogona kuramba zvichingoitika. Ivo vanofungidzira kuti chimwe chinhu icho chaive mari yakanaka munguva pfupi yapfuura ichiri yakanaka mari.
"Pese paunenge uchirwadziwa, chiratidzo chekuti pane zviri kupokana."
“Vanhu vane tsika dzakanaka dzekushanda vanofanirwa kuita zvinyorwa zvinokosheswa zvine musoro, uye vanoita izvo zvinofanirwa kuitwa. Mukupesana, vanhu vane maitiro akashata ebasa vanoita zvisingaite pazvinhu zvinouya nenzira yavo, kana ivo havagone kuita zvinhu zvavanofanira kuita nekuti havadi kuzviita (kana havagone kuzviita).
"Chenjera ungwaru unozvitutumadza uyo unotaura kubva kumatendi usina kutamba pasi."
“Ndinotenda kuti kune mitemo isingaverengeki yezvinhu zvese uye kufambira mberi kana zviroto zvakawanikwa zvinobva mukushanda nenzira inoenderana nazvo. Iyi mitemo uye misimboti yemashandisirwo anoenderana nazvo yakagara iripo. Vakatipa mitemo iyi nehunhu. Munhu haana kuzvigadzira uye haakwanise kuzvigadzira. Unogona chete kutarisira kuvanzwisisa nekuvashandisa kuti uwane zvaunoda. '
Usatsvage vanhu kungoenderana nebasa rekutanga ravachaita; hire vanhu vaunoda kugovana hupenyu hwako navo.
"Vanhu vanofara kwazvo vanoona hunhu hwavo uye vanofananidza hupenyu hwavo nahwo."
"Kana iwe usingakwanise kuita chimwe chinhu zvinobudirira, usafunge kuti unogona kuudza vamwe kuti chinofanirwa kuitwa sei."
«Musimboti wekutanga: Funga wega kusarudza 1) zvaunoda, 2) ichokwadi chii, uye 3) zvaunofanirwa kuita kuti uwane pekutanga muchiedza chechipiri ... uye uzviite nekuzvininipisa uye nepfungwa dzakajeka kuti iwe unofunga pfungwa yakanakisa iwe yaunowana kwauri.
Fungisisa uye urangarire kuti kushoropodzwa chaiko ndiyo mhinduro yakakosha yaunogona kugamuchira.
"Zvakakosha kuita zvinhu zvikuru nemazvo, pane kuita zvidiki zvakakwana."
"Kana dambudziko rikaitika, tungamira hurukuro pamatanho maviri: 1) chikamu chemuchina (nei mhedzisiro iyi yaitika) uye 2) iyo kesi-padanho rekuita (zvekuita nezvazvo)."
"Mumakambani mazhinji, vanhu vari kuita mabasa maviri: ravo chairo basa uye basa rekutarisira zvinofungwa nevamwe nezve maitiro avari kuita basa ravo."
"Aityawo kufinhwa uye kupokana zvakanyanya kupfuura zvaakatya kukundikana."
"Mamaneja asinganzwisise maitiro akasiyana ekufunga kwevanhu haagone kunzwisisa kuti vanhu vanovashandira vanoita sei mamiriro akasiyana."
“Bhadhara munhu wacho, kwete basa racho. Ona zvinoitwa nevanhu vari mumabasa akaenzana ane zvitupa zvakaenzanisirwa uye neruzivo, wedzera shoma shoma pane izvo, uye uvake pamabhonasi kana zvimwe zvinokurudzira kuitira kuti vakurudzirwe kubvisa bhara kubva kubhora. Usambofa wabhadhara zvinoenderana nemusoro webasa wega.
"Vanhu vanokushandira vanofanira kugara vachikupikisa."
"Zvauchazove zvinoenderana nemaonero ako."
"Kusava nechokuhwanda kunoderedza kunetseka uye kunovaka chivimbo."
"Kubatsira shanduko kunotanga kana iwe uchikwanisa kuziva uye nekutogamuchira zvaunokanganisa."
“Kunyange ndaimboita hasha nekushungurudzika nevanhu nekuda kwesarudzo dzavakaita, ndakaona kuti vanga vasiri kuita nemaune nenzira inoita seisina gwara; Vaingovawo vapenyu zvinhu nenzira yavavaona nayo, zvichibva nemashandiro avo njere.
"Hapana maneja chero padanho anogona kutarisira kubudirira pasina hunyanzvi seti yeinjiniya wesangano."
"Nekufamba kwenguva, ndakaona kuti kugutsikana nekubudirira hakubvi mukuzadzisa zvinangwa zvako, asi nekurwa zvakanaka."
"Chenjera zvirevo zvinotanga ne" ndinofunga. . . » nekuda kwekuti mumwe munhu "anofunga chimwe chinhu" hazviiti kuti zvive zvechokwadi. "
"Ndakazoona kuti kushaya simba kukuru kwevanhu mativi esimba ravo guru."
"Magamba anosangana nekusakundikana kumwe kukuru kunoedza kuti vane simba here rekudzoka kuzorwa nenjere uye nekutsunga kukuru."
"Chokwadi chaicho, zvakare, chinokutumira makwikwi akasimba ezvekuti mashandiro ako anoshanda sei nekukupa mubayiro kana kukuranga, kuitira kuti iwe udzidze kuzvibata nenzira kwayo."
“Zvinotaridza kwandiri kuti hupenyu hune zvikamu zvitatu. Mukutanga, tinovimba nevamwe uye tinodzidza. Mune wechipiri, vamwe vanovimba nesu uye isu tinoshanda. Uye mune yechitatu neyekupedzisira, kana vamwe vasingachazovimba nesu uye isu tisingachafanirwe kushanda, isu takasununguka kunhuhwirira hupenyu.
"Zvikanganiso zvangu zvinorwadza zvakachinja kubva pakuva nemaonero ekuti 'Ndinoziva kuti ndakarurama' kuenda pakuva ne'Ndinoziva sei kuti ndiri pachokwadi? '
"Siyanisa pakati pako semugadziri wemuchina wako uye iwe semushandi nemushini wako."
"Hukuru huri nani pane hunotyisa, uye hunotyisa huri nani pane husingaiti, nekuti zvinotyisa zvinopa hunhu kuhupenyu."
"Chinhu chakakosha ndechekusaziva ramangwana, kwaive kuziva maitiro ekuita nenzira kwayo kune ruzivo rwunowanikwa panguva imwe neimwe panguva."
"Ini ndinofunga ese masangano ane mhando mbiri dzevanhu: avo vanoshanda kuve chikamu chemishini, uye avo vanoshandira mubhadharo."
"Chenjera vanhu vanovhiringidza zvinangwa nemabasa, nekuti kana vasingakwanise kuita mutsauko, haugone kuvimba navo nemabasa."
"Vanhu vari kunetsa kuwana, saka ita shuwa kuti unofunga nezve nzira yekuvachengeta nayo."
Usango tarisa pabasa rako chete; teerera mashandiro achaitwa basa rako kana usisipo.
“Matambudziko aunosangana nawo achakuedza nekukusimbisa. Kana usiri kukundikana, hausi kudarika miganhu yako, uye kana usiri kudarika miganhu yako, hausi kuwedzera kugona kwako.
'Misimboti inzira dzekubudirira kubata nemitemo yezvakasikwa kana nemitemo yehupenyu. Avo vanovanzwisisa zvakanyanya uye nekuvanzwisisa kwazvo vanoziva nzira yekudyidzana nenyika zvakanyanya kupfuura avo vanoziva zvishoma nezvavo kana kuvaziva zvishoma.
“Muhupenyu hwedu hwese, tinoita mamirioni nemamiriyoni esarudzo idzo dziri kubhejera, zvimwe zvihombe uye zvimwe zvidiki. Maitiro atinoita isu akakosha kufunga nezvazvo nekuti ndidzo dzinopedzisira dzaona mhando yehupenyu hwedu.
"Sekutaura kwaCarl Jung," Kusvikira iwe watora iyo yekuziva isingazivi, ichaendesa hupenyu hwako uye iwe uchaidaidza kuti ramangwana. " Zvinotonyanya kukosha kuti kutora sarudzo kunoenderana neuchapupu uye zvine musoro kana mapoka evanhu achishanda pamwechete.
Unoisa sei mari?
Mushure mekuverenga mitsara yaRay Dalio isu tinofanirwa kuziva kuti iye anoisa hupfumi hwake pamatanho akasiyana nemisimboti. Izvi zvinowanzo kuve zvine hungwaru kudyara. Zvinogona kunge zvakaoma, asi zvakare iri nzira yakanakisa yekuwana mari. Uyu investor mukuru yakagadzira akateedzana enhanho nhanho matanho ekuti basa rireruke. Iwo anonzi "Ray Dalio's Investing Misimboti" uye isu tichaakurukura nezvayo pazasi.
Maitiro: Iyo kambani yatiri kuzoisa mari inofanirwa kuve nehunhu uye kunyangwe tsika yayo, sezvo ichatsanangura mashandiro ayo. Ichaonekwa seyakanaka kana tsika yayo yakavakirwa pakujeka, kutsvaga kwevakanaka uye chokwadi.
Mvumo yekukanganisa: Sezvo isu tatoona mune akati wandei emitsara yaRay Dalio, zvikanganiso zvinofanirwawo kubvumidzwa, nekuti kwaari ivo chikamu chekuyedza. Nekudaro, ivo vanofanirwa kuve vanozivikanwa kuti vadzidze kubva kwavari.
Tsvaga chokwadi: Nezve ichi chirevo, kuzvininipisa uye kusimbisa zvakakosha mune zvese pfungwa dzevatungamiriri uye mutsika yekambani. Izvi zvinoratidzwa mumitsara yakati wandei naRay Dalio.
Kusarudza vanhu chaivo: Izvo ndezve kubheja kumakambani anoshandira vanhu vakatanhamara kana zvasvika pakushanda.
Bata matambudziko: Kugadzirisa matambudziko, iwe unofanirwa kuzvitarisa musoro uye nekuwana mhinduro. Masystem anofanirwa kugadzirwa uye zvikanganiso zvavo zvionekwe kuitira kuti vagadzire chirongwa chakatsetseka, kuwedzera mikana.
Mukana wekubhadhara: Dzimwe nguva zvinogona kunge zviri izvo kuti paine maviri kana anopfuura mhinduro kudambudziko nekufanana kushanda. Nekudaro, zvakafanira kuona kuti ndeipi yesarudzo inonyanya kushanda. Kuti uite izvi, mukana wemutengo ongororo unotibatsira.
Ita zvine musoro zvisarudzo: Kunyangwe ichiita sezviri pachena, kazhinji vanhu vanhu vanofambiswa neiyo intuition kana manzwiro, kunyangwe vasingazive. Neichi chikonzero, zvakakosha kuti uise mari mumakambani aya anoongorora matambudziko zvine musoro uye zvine musoro nekuverenga kukosha kunotarisirwa kune imwe neimwe yemhinduro dzinogona kuitika. Izvi zvinoshandawo kune investor.
Ndinovimba kuti zvirevo zvaRay Dalio zvakabatsira kukurudzira iwe uye zvakakuparadzira huchenjeri hwakakosha uye kuraira kwekufunga nezvako pakuisa mari. Iwe unogona kutiudza iwe ruzivo rwako mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Ray Dalio Quotes
Zviri nyore uye zvakakomberedza kufarira